Kulankii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo natiijo la’aan ku soo dhammaaday | Dhacdo
Home Wararka Maanta Kulankii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo natiijo la’aan ku soo dhammaaday
Waxaa xalay shir saacado badan qaatay Magaalada Muqdisho ku yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble iyo Xubnaha Midowga Musharaxiinta, iyadoo shirka looga hadlayay arrimihii ay isula soo qaadeen labadii kulan ee hore.
Wasiirka Amniga Somaliya, Xasan Xundubey Jimcaale oo geba-gabadii shirkaasi Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Midowga Musharaxiinta ay dalbadeen in laga qaybgeliyo shirka wadatashiga qaran, ee Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, go’aankaas oo sida uu sheegay aanay lahayn xukuumadda oo keliya.
“Shirka loo fadhiyay waxa uu ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen musharaxiinta oo ku saabsan in lagu daro madasha Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe ka dhaxeysa, oo waxyaabihii lagu heshiiyay 17-kii September iyo 16-kii February ee Baydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qaybgalaan. Arrinkaasi sida aad ogtihiin saacado dheer ayuu qaatay, arrin ay dowladdu ama xukuumaddu masuul ka tahayna maaha. Waa arrin u yaala Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe, haddii la furayo iyo haddii aan la furayn, haddii dad lagu biirinayo iyo haddii kale, go’aankeeda aysan xukuumaddu iska lahayn.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Xundubey ayaa yiri “Arrintaasi ayada ah ayaa waqti dheer runtii qaadatay, ayaguna ay ku adkeysteen illaa wa illaa in la furo, xukuumadda uu Ra’iisal Wasaaraha hoggaaminayana ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl taalo xukuumadda ahayn, taladeedana aysan ka go’in, horeyna aysan u dhicin in la furo madalihii ka horeeyay, tanina furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn.”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u hadlay Midowga Musharaxiinta ayaa xukuumadda ku dhaliilay inaanay lahayn awood ay go’aan ku gaari karto.
“Dadaal kasta oo middowga bixiyay iyo tanaasul kasta uu sameeyay runtii taas bedelkeeda anaga maanan arkin. Waxaan aad iyo aad uga xunahay in dad go’aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh, oo aan caawa dhan la fadhinay inay muuqatay go’aanka ayaga inaysan lahayn, waa nasiib-darro u soo hooyatay taariikhda siyaasadda Somaliya.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan jeclaan lahayn inay kalsooni is geliyaan, oo ay aaminaan inay talada iyo go’aanka siyaasadeed ee dalka ayaga leeyihiin, laakiin qoraal kasta ama is afgarad kasta oo gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan, taasaana keentay inuu saacado qaato shirka.”
Dhanka kale Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa sheegay in qodobadii shirka looga hadlay leesku raacay, marka laga soo taggo hal qoodb oo Midowga Musharaxiinta ku adkeysteen.
“Shirkii aan la qaatay Midowga Musharaxiinta waxaan sameynay tanaasul badan. Qodobadii aan ka hadalnay waan isku raacnay, marka laga reebo qodob ay ku adkeysteen oo ah in laga qaybgeliyo Shirka Madasha Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir. Taas oo la macne ah in dib loo furfuro heshiiskii 17-kii September 2020, oo aanan kaligey xaq u lahayn wax ka badelkiisa. Weli Albaabadeydu way u furan yihiin wadahadal iyo is-qancin, si aan xal kama dambeys ah u gaarno, dalkana uga hirgelinno doorasho hufan oo si nabad ah ku dhacda.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha oo warkan ku sheegay bartiisa xiriirka dadweynaha.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa waxaa shirka ku wehlinayay Madaxweynaha Hirsabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish).
Previous articleWeerar qaraxyo ku bilowday oo caawa lagu qaaday jeelka Boosaaso
Next articleMacluumaad la xiriira: Weerarkii xalay lagu galay jeel weyn ee Boosaaso